नागरिकलाई घरमै गएर गोली हानी मार्ने अधिकार सरकारलाई छैन — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » अन्तर्वार्ता, बिचार/ब्लग → नागरिकलाई घरमै गएर गोली हानी मार्ने अधिकार सरकारलाई छैन
नागरिकलाई घरमै गएर गोली हानी मार्ने अधिकार सरकारलाई छैन
October 2, 2015७८० पटक
प्रहरीको सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेका गुण्डा नाइके कुमार घैंटेलाई सामाखुसीस्थित उनकै निवास अघि इन्काउन्टरमा मृत्यु भएको जनाएको छ । गोली लागेर गम्भीर घाइते भएलगत्तै घैंटेलाई शिक्षण अस्पताल पुर्याए पनि चिकित्सकहरुले मृत घोषणा गरे । घैंटेलाई गोली लागेको खबर पाएपछि कांग्रेसका सभासद तथा नुवाकोटका नेता जगदीशनरसिंह केसी कार्यकर्तासहित अस्पताल पुगेका थिए । अस्पतालमा पुगेर उनले गृहमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा घैंटेको घरमै पुगेर प्रहरीले हत्या गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनै केसीसँगको संक्षिप्त कुराकानी:
कुमार घैंटेजस्तो प्रहरीको ‘मोस्ट वान्टेड’को सूचीमा रहेको गुण्डा मारिँदा किन बिरोध गर्नुभयो ?
कुनै पनि नागरिकलाई उसैको घरमा गएर गोली हान्ने अधिकार कसैलाई छैन । गृह प्रशासनको आडमा कुनै रङ दिएर नागरिकलाई मार्न पाइँदैन । विगतमा जे–जस्तो भए पनि कुुमार घैंटे अहिले सामान्य जीवन बिताइरहेको मान्छे हो । ऊ एउटा व्यवसायी हो । प्रहरीले विभिन्न बहाना बनाएर कसैको आदेश पालना गर्ने नाममा नागरिकको हत्या गर्न पार्इँदैन । खै कहाँ छ गृह प्रशासन ?
उनी त विभिन्न अपराध गरेको भन्दै उजुरी परेको र प्रहरीले ‘मोस्ट वान्टेड’को सूचीमा राखेका व्यक्ति हैनन् र ?
‘मोस्ट वान्टेड’को सूचीमा राखेको व्यक्तिलाई चाहिँ घरमै गएर गोली हान्ने कानुन छ ? अपराधी भए पनि राज्यले कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । फेरि काठमाण्डु जिल्ला अदालतले सफाइ दिइसकेर आफ्नो व्यवसाय गर्दै आएको मानिसलाई घरमा मारेर इन्काउन्टर भन्न मिल्छ ? अपराधी भए पनि बाँच्न त पाउनुपर्छ नी ।
प्रहरीले त घैंटेको समूहले फाइरिङ गरेपछि इन्काउन्टरमा मरेको दावी गरेको छ नी ?
पसलबाट तरकारी किनेर घरभित्र छिरेको मानिसले के प्रतिकार गर्छ ? घरभित्र छिरेर स्कुटर रोक्न नपाउँदै प्रहरीले गोली प्रहार गरेको छ । उनलाई ६ गोली हानी ढलेपछि आफैं उपचार गर्न लैजान मोटरसाइकलमा राख्नुअघि नकावधारी प्रहरीले ‘यो त जिउँदै रहेछ’ भन्दै फेरि ३ गोली टाउकोमा प्रहार गरेको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने प्रहरीले कसैको आदेशमा यो घटना घटाएको हो ।
तपाईंको पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अपराधीलाई सफाया दिएको छ नी ?
नागरिकलाई विभिन्न बहानामा गोली हान्दै मार्न मिल्छ ? फेरि कुनै आपराधिक क्रियाकलाप गरेको भए स्वभाविक थियो । तर, अदालतबाट सफाया पाएर आफ्नै पेशा गर्दै आएको व्यक्तिलाई मारेर सरकारले कस्तो शान्ति सुरक्षाको परिकल्पना गरेको छ । यदि त्यस्तो हो भने किन चाहियो गृह प्रशासन ? जनताले कसरी राज्यको अनुभूति गर्ने ? सरकारको नेतृत्व जुन पार्टीले गरे पनि निन्दनीय काम भएको छ ।
हामी यो घटनाको न्यायायिक छानविन गर्न माग गर्छौं । यो घटनाको बारेमा न्यायोचित छानविन नभए हामीमाथि पनि आक्रमण हुने खतरा छ । चित्त नबुझेका मानिसले घैंटेको पक्षमा बोलेको भन्दै हामीलाई पनि आक्रमण हुने खतरा छ । गृहप्रशासनले हाम्रो पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ । गृहमन्त्रीले बनावटी जवाफ त दिनुहोला । तर, कानुनको आडमा गृहप्रशासनले गर्ने अपराधको भण्डाफोर गरेरै छाड्छौं ।